Manchester United oo ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa da’yarka kooxda Chelsea ee Callum Hudson-Odoi – Gool FM
(Manchester) 24 Maarso 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay soo gashay tartanka loogu jiro saxiixa da’yarka weerarka uga dheela naadiga Chelsea ee Callum Hudson-Odoi sida wararku ay sheegayaan.
18-sano jirkaan ayay Bayern Munich miiska u saartay dalab 35 milyan oo gini ah bishii Janaayo, waxaana la rumeysan yahay inuu weli ka fiirsanayo dalabka ay ka soo gudbisay kooxda xafidanaysa horyaalka Jarmalka.
Borussia Dortmund iyo kooxda Premier League ka dheesha ee Liverpool ayaa sidoo kale doonaya inay u dhaqaaqaan soo xero gelinta xiddigan heerka caalami ee dalka England, kaasoo hal sano ka hartay heshiiskiisa haatan.
Hudson-Odoi ayaa u muuqda mid aan ku qanacsanayn inuu heshiis cusub la galo kooxda ka dhisan garoonka Stamford Bridge, taasoo keentay inuu dagaal ka dhex abuuro kooxo waa weyn suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga.
Wargeyska Daily Mail ayaa shaaca ka qaaday in kooxda Manchester United ay isku diyaarinayso inay ku dagaalanto saxiixa da’yarkan, inkastoo naadiga Chelsea ay door-bidayso inay u diraan kooxaha dibadda halkii ay ka iibin lahayd koox ay si toos ah u xafiiltamaan.
Iyadoo 15 bilood oo kaliya uu tixan yahay qandaraaskiisa ayaa hadda waxaa soo baxday warbixin sidoo kale muujineysa in qiimeynta Hudson-Odoi uu hoos ugu dhacay 30 milyan oo gini.